Shil Siyaasadeed:Faallo Xiisa Badan Oo Ka Hadlay Siyaasiyiinta Kuraasta Somaliland Ka Daatay Iyo Xaalkooda Danbe W/Q: Cali Cabdi Coomay
Xukunkii uu doonayey hel, waa se maalin kale maantu, oo siday isu-qaban dhaqankiisii hore iyo kan uu soo galay? Mooyi, isagaa ka jawaabi. Waa nin dantiisa wax walba ka hormariya, dantiisuna waa sideed xukun ku heshaa. Dhaqaal...
Culimada Gobolka Awdal iyo Salaadiintu ma siyaasada ayuunbay ka hadlaan Maxay uga hadli Wayday Go,aanka Shirkada biyaha ee shaba ay ka qaadatay Shacabka Reer Awdal. Qalinkii Axmed C/laahi Jaamac
Culimada G/Awdal Waxyaabaha lagu yaqaanay waxa kamid ah in ay ka hadli jireen wax kasta oo dhibaato ku ah bulshada ku dhaqan G/Awdal waxayna ka qaadan jireen doorkooda ilaa dhibaatadaa xal loo helayana kama ay hadhi jirin . H...
Guriga Cad Oo Ku Dhawaaqay In La Shaybaadhayo Caafimaadka Madaxweynaha Maraykanka Trump
Guriga Cad ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sannadka foodda innagu soo haya ee 2018 ka geli doono shaybaadh caafimaad oo lagu eegayo fayaqabka maskaxdiisa, natiijada ka soo baxdana ...
Ka dib markii taageerayal kala duwan ay codeeyeen, Maxamed Salaax oo u ciyaara Liverpool ayaa ka guuleystay ciyaaryahannada kala ah Pierre-Emerick Aubameyang oo Gabon u dhashay, Naby Keita oo u dhashay Guinea, Sadio Mane xirfa...
Akhriste Maxaad Kala Socotaa Ninka Qudha Ee Maraykana Ee U Safri Kara Dalka Kuuriyada Waqooyi.
Mareykanka ayaa 52 jeer booqday dalka Kuuriyada Waqooyi, kaas oo caawiya dadka tabaaleysan. Ninkaas ayaa sheegay in xayiraadda socdaalka ee Mareykanka uu saaray maamulka Pyongyang in aysan ka joojin doonin in howlgal gargaar ...
In expressing and commenting on the healthcare reform in Somaliland that has much attention to cope with its landmarks and primary goals. Somaliland’s mixed Health reform underlines the basis of grass root plans and objec...
Xabbad Beed Ah Oo Aad Ilmahaaga Maalin Kasta Siisaa Waxa Ay Ka Ilaalisaa In Uu Callaan Noqdo Iyo Sababta.
Cilmibaadhis cusub ayaa daahfurtay in carruurta yaryar oo maalin kasta la siiyo xabbad beed ahi ay si weyn uga qayb qaadato koritaanka ilmaha lana dagaallanto in ilmaha miisaankiisu ka yaraado inta caafimaad ahaan saxda ah ama...
Daraasad:Faa’iidooyinka Caafimaad Ee Ku Jira Malabka Oo Aroortii Hore La Cuno.
Waa ay badan yihiin daraasadaha caafimaad ee midiba dhan ka eegto faa’idooyinka aan la soo koobi karin ee Alle malabka u geliyey aadamaha, iyada oo mid kastaa soo bandhigayso natiijo muujinaysa faa’idooyin aan hore loo oge...
Ardey ka Cabatey Imtixaan Xisaabeed Fasalka Siddeedaad ah iyo Sababta.
n Isniintii waxaa dalka New Zealand ka dhacay imtixaanka qaran ee fasalka Siddeedaad ee loogu gudbo dugsiga sare. Saddex warqadood oo imxitaanka ka mid ah ayay ardaydu aad uga cawdeen kuna tilmaameen wax aan suurogal aha...
Tareen ula Anbadey Rakaabkii Jiho aan aheyn Halkii ay u Socdeen,Maxaase…
Koox beeralay ah oo dalka Hindiya u dhashay ayaa sheegay in markaliya ay ku baraarugeen in tareenkii ay saarnaayeen u geeyay masaafo 160km ah oo aanan ahayn halkii ay u socdeen. Illaa 1,500 beeralay ah ayaa u socday gobol...